News Collection: महिनावारी भएको नौ दिनभित्र यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ?
महिनावारी भएको नौ दिनभित्र यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ?
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एकमात्र यौनसम्पर्कमै गर्भ रहन्छ, तर सधैं त्यस्तो हुँदैन। गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्य स्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बवाहिनी नलीमा पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब (अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ। यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन (FERTILIZATION) भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज (ZYGOTE) भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु बन्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रूपमा १. डिम्ब निष्कासन, २. यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्बरोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ। शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको हुनु जरुरी छ। तपाईंलाई थाहै होला, महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ। डिम्ब निष्कासन हुने समयनजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के भने डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ। यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाका १४औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले उक्त समयमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्रजनन अङ्गभित्र शुक्रकीटहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, त्यसैले डिम्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भधारणका दृष्टिकोणले असुरक्षित काल मानिन्छ। सामान्यतः महिनावारीको नवौं दिनमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ।
यसमा महिनावारी ठीक २८ दिनमा नभै ढिलो-चाँडो हुन्छ भने केही सोच्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित काललाई नै गर्भनिरोधका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ६ महिनासम्मका महिनावारीका दिनहरू लिनुपर्छ। सबैभन्दा छोटो महिनावारीबाट १८ दिन घटाउँदा गर्भवती हुनसक्ने पहिलो दिन पत्ता लाग्छ भने सबैभन्दा लामो दिनबाट ११ दिन घटाउँदा गर्भवती हुनसक्ने अन्तिम दिन पत्ता लाग्छ। उदाहरणका लागि यदि कुनै महिलाको महिनावारी चाँडोमा २४ दिनको र ढिलोमा ३१ दिनको हुने रहेछ भने,
२४-१८.६ हुन्छ, अर्थात् छैटौं दिनदेखि सम्भोग गर्दा गर्भ रहन सक्छ।
३१-११.२० हुन्छ, अर्थात २० औं दिनभन्दा पछि यौनसम्पर्क गर्दा हुन्छ।
माथिको हिसाबबाट तपाइर्ंले पक्कै पनि जवाफ पाइसक्नुभएको छ। अर्को कुरा, सुरक्षितकालबाहेक अरू समयमा यौनसम्पर्क नै नगर्ने वा कन्डमजस्ता साधन प्रयोग गर्ने। यो विधिले गर्भबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने भए पनि यौनरोग र एचआईभीबाट बचाउँदैन। यौनरोग तथा एचआइर् भीको संक्रमणवाट बच्न कन्डमको नियमित तथा सही प्रयोग अनिवार्य छ।
मेरो यौनसाथीसँग लामो यौनसम्पर्क राख्न नसक्ने समस्या छ। यो के कारणले भएको हो ?
तपाईंको छोटो प्रश्नमा लामो समयसम्म यौनसम्पर्क राख्न नसक्ने कुरा त बुझियो, तर यो समस्या कस्तो हो भन्ने कुराचाहिँ बुझ्न सकिएन। तपाईंको यौनसाथीले सहयोग नगर्नुभएको वा नमान्नुभएको हो भने कुरा अर्कै भयो। तपाईं वा तपाईंको यौनसाथी मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्न भने समस्या एक किसिमको भयो, जस्तै कि चिन्ता वा तनावका कारणले। त्यसैगरी शारीरिक रूपमा थकान वा कुनै अवस्थताका कारणले त्यस्तो भएको हो भने कुरा अर्कै भयो। तपाईंको लिङ्ग उत्तेजित नभएका कारणले समस्या परेको हो कि शीघ्र स्खलनका कारण भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। किन्सेले गरेको अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषले चरमसुख पाएको देखिएको थियो। कम्तीमा दुई वर्ष विवाहित जीवन बिताइसकेका पुरुषहरू सम्मिलित एक अध्ययनमा स्वस्थ व्यक्तिहरूको सालाखाला यस्तै ३ दशमलव ०१ मिनेटमा वीर्य स्खलन भएको थियो। कतिपयले यो समय सामान्य नै भए पनि छोटो भएको मान्ने गरेको पाइन्छ।
राम्रोसँग लिङ्ग उत्तेजित नहुँदा पनि यौनसम्पर्क छोटो हुन्छ। तनाव, चिन्ता, ग्लानि, उदासीपन, आत्मविश्वास कम हुनु, यौन सक्षमताको चिन्ता, यौनसम्बन्धी कुरामा नै अरुचि हुनु, यौन जोडीसँगको सम्बन्धमा भएको एकनासेपनले दिक्क हुनु, यौनरोग वा अन्य रोग लाग्ला कि भनेर चिन्ता, भावनात्मक असन्तुलन वा अन्य मनोवैज्ञानिक रोग हुनुजस्ता कुरा पनि लिङ्ग उत्तेजित नहुने कारण हुनसक्छ। शरीरमा भएका अन्य रोग, चोटपटक तथा औषधीको प्रभावले पनि लिङ्गको उत्तेजना नभएको हुनसक्छ। लिङ्गको उत्थित हुन सक्ने तन्तुमा रक्तप्रवाहलाई नकारात्मक रू पमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि स्थिति लिङ्ग उत्तेजना नहुने सम्भावित कारण हुनसक्छ। मधुमेह, मृगौलाको खराबी वा कलेजोको खराबी, प्रजनन अङ्ग वा त्यसको स्नायु प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने गरेर भएको चोटपटक वा रोग, रक्तनसा वा रक्तप्रणालीमा भएको खराबीले लिङ्ग उत्तेजित नहुने समस्या गराउन सक्छ। कतिपय औषधी पनि यसको कारण हुन सक्छ। बढ्दो उमेरसँगै पनि यो समस्या देखिन्छ।
त्यसैगरी शीघ्र वीर्य स्खलनका कारण पनि यौनसम्पर्क चाहेअनुसार अवधिको नहुनसक्छ। घर्षण नै गर्न नपाई योनिमा छिराउनासाथ वा छिराउनुअघि नै वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो। यसको पक्का कारण यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि शीघ्र स्खलनको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ। कतिपय मानिसमा यौनसम्पर्क वा क्रियाकलापमा 'राम्रो' गर्न नसक्नु पनि गम्भीर चिन्ताको कारण हुनसक्छ। आफ्नो यौनसाथीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ता (performance anxiety) ले समस्या अझ बढ्छ। विरलै भए पनि केही psychotropic drug कतै यस्तो समस्याको कारण त होइन भनेर केलाउन पनि बिर्सनु हुँदैन।
माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूमध्ये केसँग तपाईंको समस्या सम्बन्धित छ लेखी पठाउनुभयो भने समाधानका लागि उचित जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु।